WordPress: Ku dheji WordPress si toos ah ayaa loo sii daayaa | Martech Zone
WordPress: Ku dheji WordPress si toos ah ayaa loo sii daayaa
Arbacada, February 21, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
In yar oo ka mid ah baloogyada aan akhristo boostada mar kasta oo la sii daayo WordPress. Runtii waa wax yar oo laga xumaado laakiin waxaan jeclahay xaqiiqda ah in dad badani ay ka walaacsan yihiin oo ay doonayaan inay ereyga si dhakhso leh uga baxaan. Haddii aad ka mid tahay kuwa wax qora ee jecel inay taageeraan, ha ku mashquulin qorista boostada - WordPress si toos ah ugu dheji bartaada adoo adeegsanaya emayl!
Halkan waa sida:
U samee cinwaan emayl aad iyo aad u adag koontadaada oo aan cidina ka fikiri doonin inay malayso.
Ku samee boostada Via Email ee WordPress cinwaanka emailkaaga iyo macluumaadkaaga kale ee POP:
Hada iska qor ogeysiiska sii deynta ee cinwaanka Emailka ee WordPress:
Voila! Hada WordPress wuxuu si toos ah ugu soo diri doonaa Ogeysiis Siideyn qoraal ah bartaada!
UPDATE: Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto lambar si aad u beddesho tixraac kasta oo cinwaanka emaylkaaga ama xiriiriyeyaasha rukunka. Runtii wali ma helin mid ka mid ah emaylladan wali… laakiin waxaan ogaan doonaa sida loo sameeyo marka aan helo kii iigu horreeyay.
WordPress Plugin: PostPost (La cusbooneysiiyay)
WordPress: Sida loo dhiso Tag Cloud Page
Febraayo 28, 2007 saacadu markay tahay 12: 52 AM
Fikrad wanaagsan. Dheeraad ah oo taas ah, waan ogahay hubaal, fikraddan boostada loogu soo diro emaylka ereyga sifiican ugama shaqeyso.
Marka waxaan kugula talin lahaa BlogMailr
Tani si fiican ayey u shaqeysaa sida laga arki karo qoraalkayga.